जुनदिन विद्याले रविन्द्रलाइ शुभयात्रा भनिनन् ! - ।। Naya Kuro ।।
२६ फाल्गुन २०७५, आईतवार २१:३७ March 10, 2019 Naya KuroLeaveaComment on जुनदिन विद्याले रविन्द्रलाइ शुभयात्रा भनिनन् !
“म जहाँ जाँदा पनि उहाँलाई शुभयात्रा भनेर बिदाइ गर्थँे, त्यही दिन मात्र मलाई शुभयात्रा भन्ने अवसर मिलेन, आज पनि त्यही पश्चात्ताप छ ।” तत्कालीन मन्त्री तथा नेकपाका नेता रवीन्द्रप्रसाद अधिकारीकी पत्नी विद्या भट्टराई निधनको १२ औँ दिनमा अधिकारीलाई सम्झँदै भन्नुहुन्छ ।
सामाजिक सञ्जालभरि घटना भएको केही घण्टाभित्रै अधिकारीकी श्रीमती विद्याको मन रुवाउने कविता भनेर सार्वजनिक गरिएको भिडियोप्रति भट्टराईले आपत्ति जनाउनुभएको छ । “घटना भएको केही घण्टामा नै मेरो नामको कविता र स्वर भन्दै युट्युब र सामाजिक सञ्जालमा राखिएको रहेछ । त्यति छिटो त्यो अवस्थामा म कसरी कविता लेखेर वाचन गर्न सक्छु ? धेरैले मैले नै हो भनेर सोच्नुभएको रहेछ । भेट्न आउनेले पनि सोध्नुभयो । मप्रति सहानुभूति राखेर पीडाको व्यापार जसले गर्नुभयो, त्यो राम्रो भएन । यसले मलाई झनै दुःखी बनाएको छ । यसले भ्रम छर्ने काम भएको छ । को हो त्यो पत्ता लगाउने प्रयास भैरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । (रासस)
२०७५ साल फागुन २७ गते सोमबार (सन् २०१९ मार्च ११ तारिख) आजको राशिफल
२४ श्रावण २०७६, शुक्रबार १७:५७ August 9, 2019 Naya Kuro
२० मंसिर २०७६, शुक्रबार १४:१२ December 6, 2019 Naya Kuro